छोराले मात्रै गर्नुपर्ने मान्यतालाइ तो’ड्दै, आमाको कि’रि’या आफै गर्दै छिन यी १६ बर्षिय कि’शोरी ! - Mitho Khabar
June 29, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on छोराले मात्रै गर्नुपर्ने मान्यतालाइ तो’ड्दै, आमाको कि’रि’या आफै गर्दै छिन यी १६ बर्षिय कि’शोरी !
लेटाङ / मोरङको लेटाङ नगरपालिका २ धोवीकी १६ वर्षिय एक किशोरीले छोराले मात्र आमाबाबुको का’जकिरिया गर्छन भन्ने मान्यतालाई तोडदै ७ दिन अघिदेखि आफनो आमाको का’जकिरिया गरिरहेकी छिन ।
१६ वर्षिय रोजिना मल्ल ठकुरीले आफनो आमा मुगाकुमारी मल्लको नि’धन पश्चात का’जकिरिया गर्दै आएकी हुन् । आफू एक्लो सन्तान भएको र छोरा नभए पनि केही फरक नपर्ने भन्दै सेतो वस्त्र लगाएर छोरा सरह कोरामा बस्दै आएकी हुन् शो’काकूल मल्ल परिवारले जनाएको छ ।
शुष्माले भनेकी छिन् के पूजा मात्रै नेपालकी सेलिब्रेटी हुन् ? आखिर किन उनी बि’रुद्ध बो’ल्दा फे’क आईडीबाट त’थानाम गा’ली गौ’लोज आउंने गर्छन् । जसलाई शुष्माले आफ्नो मोबाईलबाट प्र’माणित गरेको बताएकी छिन् ।